Ndechipi chikonzero cheiyo yakanaka yekudzora kukosha kweZR-1000 bhakitiriya kusefa kunyatsoita tester isingaenderane neinodiwa chiyero (2200±500 CFU)?
(1) Kumiswa kwehutachiona hakuenderane nezvinodiwa nechiyero chenyika.
(2)Kuyerera kwepombi ye peristaltic haina kukwana, edza kuwedzera kana kuderedza kuyerera kwemvura.
(3) Tarisa saizi yepetri ndiro (Kunyanya ndiro dzegirazi).
Chii chinoita kuti mamwe mabhakitiriya akure mushure mekuenzanisa neZR-1000 Bacteria filtration performance tester?
(1) Pombi iri kubuda, tarisa kana pombi yekubatanidza silicone pagirazi iri kubuda.
(2) Iyo nharaunda haisi aseptic kana uchigadzira tsika yepakati.
(3) Nzvimbo yebasa ine hutsinye kana HEPA sefa yatadza.
(4) Tarisa saizi yemidziyo yepetri (Kunyanya ndiro dzegirazi).
Maitiro ekugadzirisa dambudziko iro ZR-1000 bacterial filtration performance tester (BFE) haigone kutanga.
(1) Mushure mekudzvanya bhatani remagetsi, mwenje dzvuku haushande, mwenje neUV mwenje hazvishande, tarisa kana tambo yemagetsi yakabatana uye kune magetsi, uye tarisa kana iyo yekudonha yekudzivirira inochinja kumashure. yemudziyo unobatidzwa.
(2) Simba rinoratidza mwenje rakabatidzwa, mwenje uye UV mwenje unoshandawo asi chidzitiro chakasviba uye muchina haugone kusimuka, bvisa kune magetsi, simudza zvakare uye baya bhatani reseta pane yepamberi.
Dambudziko reparallelism reA, B nzira mbiri Anderson sampler muZR-1000 bacterial filtration performance tester (BFE).Sampling mhedzisiro yeA uye B nzira mbiri dzakasiyana.
(1) Tarisa uone kana mwero wekuyerera weA neB uchienderana.
(2) Tarisa uone kana pombi iri kubuda, uye tarisa kuti saizi yepetri dish yakakodzera here (kunyanya girazi petri dish, kana petri dish rakanyanya kukwirisa, rinokwenya kumusoro, izvo zvinokonzeresa iyo Anderson sampler. kudonha).
(3) Tarisa uone kana maburi ega ega Anderson sampler akavharika (nyore nzira yekuyedza, yekutarisa yekuona, kana yakavharwa, ichenese usati waedzwa).
Maitiro ekuita nekutsauka kwesefa kunyatsoshanda kweZR-1006 mask particulate sefa kunyatsoshanda uye airflow kuramba tester?
Zvinokurudzirwa kushandisa sampuli yakajairwa (senge sampuli yakaedzwa nemasangano ane chiremera) kana yakajairwa sefa ine aerosol filtration kunyatsoshanda test curve yekuenzanisa.Kana kutsauka kuchifungidzirwa, zvinokurudzirwa kuenda kune vanokwanisa kuyerwa agency kuti igadziriswe.Chiridzwa chinoda kuchengetedzwa mushure menguva yekumhanya, sekugadzirisa mota.Chiyero chekugadzirisa ndechekuchenesa ese emukati nekunze mapaipi, kutsiva mafirita zvinhu, mafirita, uye kuchenesa jenareta reaerosol, nezvimwe.
Iyo ZR-1006 masiki particulate sefa kunyatsoshanda uye airflow kuramba tester haigone kuverenga nguva uye kumhanya mushure mekutanga sampling.
Chekutanga, tarisa kana kuyerera kwesampling kwasvika pakuseta kukosha (senge 85 L/min), muchina hautange sampling kuyerera kusati kwasvika pakuseta kukosha (kusina kunyanyisa kana kuderera).Mazhinji acho anogona kugadziriswa mushure mekutsiva iyo sefa yekotoni ye fan module.Tarisa kana pombi yakavharwa, uye vharafu yekupedza yekamuri yekusanganisa inofanirwa kunge yakavhurika.
Kana kuyerera kwekumusoro nekudzika kusingasviki 1.0 L/min, HEPA sefa yephotometer module inoda kutsiviwa.Inowanzo tongwa nekutarisa kukosha kwekumanikidza kuti uone kana ichida kuchinjwa uye kuchengetedzwa (kudzvanya mutsara: sampling pressure> 5KPa, kumusoro uye kuzasi kwemhepo> 8Kpa).
Chii chandinofanira kuita kana iyo yekumusoro aerosol kusungirirwa kweZR-1006 mask particulate sefa kunyatsoshanda uye airflow resistance tester isingasvike kukosha kwechinangwa?
Kazhinji ingangove imhaka yekuti chiridzwa chinoda kucheneswa nekugadziriswa.Dambudziko iri rinogona kugadziriswa nekuchenesa muromo weaerosol jenareta, pombi, yekusanganisa kamuri, fan, uye photometer module.
Wobva watarisa kuti mushonga wemunyu wakakodzera here, kana vharuvhu yekuburitsa iri kumashure kwebhodhoro regirazi pamunyu aerosol jenareta yakavharwa.Uye tarisa kana zvese zvinomanikidza zvakajairwa (Munyu i0.24 MPa, oiri iri 0.05-0.5 MPa).
Iyo nguva yekuyedza yeZR-1201 mask resistance tester inogona kusetwa ipfupi here?
Chiyero hachitsanangure nguva yebvunzo.Ichaitwa mushure mekuyerera kwechiridzwa chakagadzikana (mukati mesekonzi gumi nemashanu).Zvinokurudzirwa kuti kuyerwa kureba kupfuura masekonzi gumi nemashanu.
Nzira yekuita sei nekutsauka kweZR-1201 mask resistance tester?
Kuenzanisa, zvinokurudzirwa kushandisa masampuli akajairwa (akadai semasampuli akaedzwa nesangano rine chiremera).Paunenge uchiita kuenzanisa, sampu imwe chete inofanirwa kuyedzwa panzvimbo imwe chete uye masampuli anofanirwa kutaridzwa nenzira imwechete.Kana iwe uchifungidzira kuti pane zvikanganiso muchiridzwa, zvinokurudzirwa kuti uende kune inokwanisa kuyera agency kuti iongororwe.